नक्सा जारी गर्दैमा लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्न मिल्दैन, ओलीले नेपाल भारत सम्बन्ध खत्तम पारिदिनुभयो - डा. सुन्दरमणि दीक्षित -
नक्सा जारी गर्दैमा लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्न मिल्दैन, ओलीले नेपाल भारत सम्बन्ध खत्तम पारिदिनुभयो – डा. सुन्दरमणि दीक्षित
काठमाडौं। नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दिक्षित खरो बोल्छन् । बेला बेलामा विवादमा आइरहने उनले यसपटक लिम्पियाधुरा नेपालको हो भनेर कसरी प्रमाण गर्ने ? प्रश्न गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बोलीले धेरै समस्या ल्याएको उनको तर्क थियो ।
मैले नयाँ कुरा ल्याएको होइन । कोरोनाले आफ्नो गुण बनाउने मुख्य प्वाइन्ट भनेको नाकको प्वाल हो । त्यो चाहिं काठमाडौंको नागढुंगा । त्यहाँबाट छिरेर आयो भने थानकोटसम्म पुग्दा त्यसलाई हाम्रो त्यसलाई घाँटी भन्ठान्नुहोस् । यो चार, पाँच दिनसम्म कोरोना भाइरस नाकको प्वालमै बस्छ । त्यसलाई जलनित्य गरेपछि त्यो भाइरसलाई मत्थर पारिदिन्छ । यो पुरानो पद्धति हो । त्यसैले बेलुका घरमा गएपछि तातोपानी तताउनुस्, त्यसमा नुन, बेसार हाल्नुस् सकेसम्म खानुस् । नियमित त्यसो गरियो भने दिनभरि टाँसिएर आएको भाइरस नुन, बेसार मसला हालेको तातो पानीले निस्तेज हुन्छ । अनि माक्स, स्यानिटाइजर पनि लगाउनुहोस् । साबुन पानीले हात पनि धुनुहोस् । हरेक दिन बेलुका सुत्ने बेलामा नाकको प्वाल जलनित्य गर्नुहोस् । यो कसैले न कसैले गरेकै छ । यो पुरानो चलन पनि हो । नुन, बेसार हालेको तातोपानी पनि नियमित खानुहोस् ।
कुनै पनि प्रविधि, पद्धति सञ्जीवनी बुटी त हुनै सक्दैन नि । जसरी साबुन पानीले हात धुनु भनिएको छ । त्यसमा पनि कुनै प्रुफ त छैन । तर, यसले हुन सक्छ भनेर संसारभरि गरे हामीले गरेका छौं । माक्स लगाउनुपनि सञ्जीबनी बुटी त होइन । त्यो माक्स पनि गुणस्तरीय ल्याउन सकेका छैनन् । त्यो पनि बुटी होइन । भीडभाडमा नजानु भनिएको छ । त्यसैले यी सबै कुरा अनुमान, अनुमान मात्रै छ । यी सबै विधिमध्ये जलनित्य हाम्रो मौलिक विधि हो । यसलाई कसैले पनि वास्ता गरेनन् । माक्स लगाउनुहोस् इन्ट्रि प्वाइन्ट नाक नै हो । हात धुनुहोस् इन्ट्रि प्वाइन्ट त नाकै हो ।
होइन, फाइदा हुन्छ भनेर क्याम्पियन त गरेको छैन नि । सरकार त पटक्कै सफल भएको छैन नि । काठमाडौंमा पनि कति ठाउँमा त आइसक्यो नि कोरोना नियन्त्रणमा त सरकार बिलकुलै असफल भएको छ नि । यो अनौठो भाइरस छ । यसलाई रोकथाम गर्न निकै गाह्रो छ । तर, म्यन कुरा भनेको काठमाडौंको नाका हो । त्यहाँ सरकारले एकदमै व्यववास्ता ग¥यो । जथाभावी लापरबाही ग¥यो त्यसले गर्दा काठमाडौंमा यो भाइरस भित्रिएको हो । अहिले काठमाडौंमा जति पनि देखिएका छन् । ती काठमाडौंमा उम्रिएका होइनन् बाहिरबाट आएका हुन् । जसरी यहाँ खतरा देखिएको छ । त्यो सरकारले सतर्कता नअपनाएका कारण नै हो । सतर्कताको जनताले धेरै दुःख गरेर पनि सामाना गरे । तर, सरकारले अपनाउनुपर्ने कुरा गर्न सकेन । त्यसमा मलाई दुःख लागेको छ ।